Maxaa kugu doortaa mar kale Dahirow? | Somaliland.Org
September 26, 2008	Bismillaahi waa Bil Ramadane,
Waxa akhristeyaal innagu soo foolle doorashadii madaxtooyada dallka oo haddii EEBBE idmo lagu wado inay dhacdo bilo kooban kadib, bal markaa waxa isku deyey inan nafta la faaqido cidda aan u codaynayo iyo sababaha aan ama ugu codeynayo ama kaga codeynayo. Dabeed markii aan rog rogey arrinka ayaa waxan ka geyn waayey in aan su’aalo weydiiyo Mudaneyaasha damucu kaga jiro inay masiirkayga iyo hoggaanka dalka majaraha u qabtaan 5 sano oo soo socda.
Qaybtan maanta haddaba su’aaluhu aniga oo soo koobaya waxay ku socdaan madaxweyne Dahir Riyale waxanay ku bilaabmayaan;
Maxaan kugu doortaa mar kale Daahirow?
Waxad tahay ninka golihii la doortay ee sharci dejinta u diiday inu awooddiisa distooriga ah ku dhaqan geliyo distoorka oo miisaaniyaddii 2006 – 2007 ee ay wax ka baddalka ku sameeyeen ilaa maanta diidday inad ku dhaqanto, taasina waa xeer ima dabro.
Waxad cabudhisay saxaafadda madaxa bannaan oo aad qasriga madaxtooyada u diidday si aanay kuu weydiin su’aalaha bulshadu sugeyso jawaabtooda. Kuwii xaqiiqada soo helayna xabsiga madheera ayaad dhigtay oo xaqoodii asaasiga ahaa awoodda kursiga kaga maroojisay. Taasina waa la jiifiyaana bannaan.
Waxad xidhxidhay Siyaasiin iyo Salaaddiin biri-ma-geyda ah oo aad muddo dheer xabsiga ku silcisay iyagoon wax dambi ah gelin waxa lagu maagayna ahayd maxay damac u yeesheen ama uga hadleen wax aanan anigu raalli ka ahayn – waa madaxdii Qaran iyo Salaaddintii. Taasina waxay ileedahay dib ayaan laguu hodin.
Waxad tahay ninka xabsi dhexdii ku xukumay Siyaasiyiin Biri-mageyda ah oo aan wax dembi ah gelin balse codsaday keiya inay helaan xaqa ay u leeyihiin inay u tartamaan doorashada madaxtinimada dalka – taasina waxay ii muujineysaa ku xad-gudubkaaga xuquuqda muwaadinka.
Waxad badhi furtay ergadii cuslayd ee uu hoggaamineyey Abwaan Hadrawi ee aad aqbalka siisay si ay idiin dhexdhexaadiyaan golaha wakiillada iyo Axsaabta kale oo aad markii ay soo saareeen go’aankii kama dambaysta ahaa intaad aqbashay haddana wacadkii ka baxday oo markay kuwii kale intoodii fuliyeen adigu diidday oo fulin weyday intaadii- Rag qawlbaa xidha ayey ahaan jirtay maahmaahdii faxnayd. Taasina waxay ileedahay wacad nin le dooro
Waxad afbuuxa ku tidhi saxaafadda la hadli maayo su’aalana layma weydiin karo marka aan hadlo ee aan waxaan doono sheego. Meel hawli ka socoto qalad lagama waayee waxad had iyo jeer ku celcelisaa ma qaldamo anigu oo macneheedu noqonayo ma sheqeeyo. Taasina waxay ileedahay Rabbi uun baan qaldamine qayrkii dooro
Waxad tidhi ardayda Jaamicadaha ka baxda waxan Xafladohooga u tegi waayey mucaaridkaa ka dhigtay meel lagu boolatiigo oo ka faa’deysta. Halkaa waxad deedifeysay xaqiiqda ah inay jaamicaduhu yihiin kuwa soo saara siyaasiyiinta una gar naqa ee markhaatiga u kala fura siyaasiyiintu markay isu garaabi waayaan. Haddii Jaamicad siyaasad laga reebo waxay noqoneysaa caano subaggii laga saaray (waa ciir). Taasina waxay ileedahay nin daneeya da’yarta dooro.
Waxad xukuumaddaada u fasaxday cayda, cabudhinta iyo cunista maalka yare ee cashuur ahaan looga qaado danyarta laga yaabo inay carruurtoodii qatantahay. Taasina waxay ileedhay Qof Alla ka cabsi leh dooro.
Waxad saddex sano iyo dheeraad qabyo tiri weyday Biriijka caasimadda oo weliba dhaqaale fara badan looga helay dadweynaha balse intii aad ballan qaadday lagaa soo saari la’yahay. Taasina waxay ileedahay nin wax qabad leh dooro
Mar aad goleyaasha la hadleysay oo aad ku bilawday su’aal layma weydiin karo balse nin masuul ah oo ay u cuntami weydey kugu soo tuuray su’aal waxad ugu jawaabtay “waar aamus waad edeb darantahaye” waa af kala qaad inu madaxweyne sidaa ula hadlo xildhibaan ummadi soo dooratay. Taasina waxay ileedahay nin wax qadderiya dooro.
Waan sii wadi karaa oo waxa igu soo duxaya qaar badan oo kale oo ka mid ah mahadhooyinka lagugu xussusan doono, balse ummaddeennu way ku daashaa akhriska maqaallada dhaadheer, sidaa awgeed waxan door biday inan maqaalkan intaa ku soo af-jaro maanta.
Gebogebada iyo cidda aan codkayga siin doono waxan ku sheegi doonaa maqaalkayga dambe.